New Links pakati peSperm Hunhu uye Cell Phone Kushandisa |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » New Links pakati peSperm Quality uye Cell Phone Kushandisa
New Links pakati peSperm Quality uye Cell Phone Kushandisa
Maserura ari kutekeshera mazuvano, nyanzvi dzichigara dzichipokana zvakanakira nekuipira kwechishandiso. Asi maserura angave ari kukanganisa kubereka kwevarume here? Masayendisiti kubva kuPusan ​​National University, Korea, nguva pfupi yadarika yakaongorora tsvagiridzo yehukama huripo pakati pekuisa urume, kugona, uye kufamba uye kushandisa mbozhanhare. Mhedzisiro yavo, inopindirana mu vivo uye in vitro data, inoshanda seyambiro kune vechirume vanoshandisa mbozhanhare vanoda kuchengetedza urume hwavo.
Nharembozha dzakabudirira kuunza nyika padyo, zvichiita kuti hupenyu hutsungirike panguva yakaoma zvikuru. Asi nharembozha dzinewo zvadzinodzikira. Vanogona kuva nemigumisiro yakaipa pahutano. Izvi zvinodaro nekuti nharembozha dzinoburitsa radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMWs), iyo inotorwa nemuviri. Zvinoenderana nemeta-analysis kubva muna 2011, data kubva kuongororo yapfuura inoratidza kuti maRF-EMWs anoburitswa nenharembozha anokanganisa kunaka kwembeu nekudzikisira kufamba kwavo, kugona, uye kuisa pfungwa. Nekudaro, iyi meta-kuongorora yakanga ine zvishoma zvisingakwanisi, sezvo yaive yakaderera huwandu hwe data mu vivo uye yakatariswa serura mbozha dzave dzechinyakare.
Mukuedza kuunza zvimwe zvinobuda patafura, boka revatsvaguri rinotungamirwa naMubatsiri Muzvinafundo Yun Hak Kim vanobva kuPusan ​​National University, Korea, vakaita ongororo itsva pamusoro pezvinozoitika mbozhanhare pamhando yembeu. . Vakaongorora zvidzidzo zve435 uye zvinyorwa zvakaburitswa pakati pe2012 ne2021 uye vakawana 18-inovhara huwandu hwe4280 samples-yaive yakakodzera kuongororwa kwenhamba. Bepa ravo rakaitwa kuti riwanikwe online muna Chikunguru 30, 2021 uye rakaburitswa muVhoriyamu 202 yeEnvironment Research munaNovember, 2021.
Pakazere, mhedzisiro inoratidza kuti kushandiswa kwenharembozha kwakabatana nekuderedzwa kwembeu motility, kugona, uye kuisa pfungwa. Izvi zvakawanikwa zvakanatswa kupfuura izvo zvakapfuura meta-analysis yekutenda kune iri nani subgroup kuongororwa kwedata. Chimwe chinhu chakakosha icho vaongorori vakatarisa machiri ndechekuti kana nguva yakakwira yekuratidzwa kunharembozha yaive yakabatana nekudzikisa kunaka kwembeu. Zvisinei, vakaona kuti kuderera kwehutano hwembeu kwakanga kusina kunyanya kuenderana nenguva yekuratidzwa-kungotarisana nenharembozha pachayo. Tichifunga kuti mhedzisiro yacho yaienderana mune zvese zviri zviviri in vivo uye in vitro (urume hwakagadzirwa), Dr. Kim vanoyambira kuti “Vanoshandisa nharembozha vechirume vanofanira kuedza kuderedza kushandiswa kweserura kuti vadzivirire kunaka kwembeu yavo.”
Tichiziva kuti huwandu hwevashandisi venharembozha huchanyanya kuwedzera mune ramangwana, yave nguva yekuti titange kufunga nezvekuratidzwa kuRF-EMW sechimwe chezvikonzero zviri kukonzera kudzikiswa kwemhando yembeu pakati pehuwandu hwevarume. Pamusoro pazvo, vachiona kushanduka kunoita matekinoroji nekukasika kudaro, Dr. Kim vanoti "zvimwe zvidzidzo zvichadiwa kuona mhedzisiro yekusangana nemaEMWs anoburitswa kubva kumhando nyowani dzenharembozha munzvimbo ino yedhijitari." Chinonyanya kukosha ndechekuti, kana uchinetseka nezvekubereka kwako (uye zvimwe zvimwe zvehutano hwako), inogona kunge iri pfungwa yakanaka kudzikamisa foni yako yemazuva ese.
Mutungamiri Biden neWhite House's new link ...